भारतमा निरन्तर ओरालोतर्फ अटो बजार, सजुकी र किया बाहेक सबैको घट्यो बिक्री
भारतीय अटो बजारमा अहिले निकै ठूलो मन्दि देखापरेको छ । हरेक महिना सवारीसाधनको बिक्री खस्किरहेको छ । नोभेम्वर महिनामा प्राय सबैजसो अटोमोबाइल ब्रान्डको बिक्री अक्टोबरको तुलनामा फराकिलो अनुपातमा घटेको छ । यद्यपी मारुती सुजुकीको हकमा भने केही संख्या बढेको...
टेस्ला इलेक्ट्रिक साइबरट्रक र फोर्ड एफ–१५० ट्रक बीच प्रतिस्पर्धा, कसले जित्यो ?
टेस्लाले हालै नयाँ इलेक्ट्रिक साइबरट्रक लन्च गरेको छ । लन्चिङ पछि सो ट्रक निकै चर्चित रहयो । कम्पनीले यसलाई ४००, ४८० र ८०० किलोमिटरको रेन्जमा लन्च गरेको हो । हालै एक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छि, जसमा फोर्ड कम्पनीको हेभी ड्युटी ट्रक र टेस्लाको इलेक्ट्र...
नेपाली सडकमा अब नयाँ ट्याक्सी गुड्ने, कस्ता गुड्दै छन् अहिले ?
हालै ट्याक्सी सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउने चर्चा चलेको छ । सरकारले बनाएको ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड चाँडै कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार अब १२ सय सीसीभन्दा कम क्षमताका ट्याक्सी चलाउन पाइने छैन । यातायात व्यवस्था विभाग...
अटोमोबाइल व्यवसायमा मन्दी, अटो लोनमा ८६ प्रतिशतले कमी
काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष सुरु भए पश्चात सवारीसाधान खरिद बिक्रीमा मन्दी देखिएको छ । यसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा (अटोलोन) मा ८६ प्रतिशत कमी आएको पाइएको छ । साउनदेखि असोजसम्म ३ महिनाको अवधिमा अटोलोन ६६ करोड ५८ लाख रु...
विकल्पको आविष्कार : सोलार स्कुटरदेखि एन्टी अल्कोहल भेइकलसम्म
तनहुँका विकल्प ढुंगाना चिने जानेहरुका बीच विकल्प युवा वैज्ञानिकका रुपमा परिचित छन् । उनले आजका मितिसम्म सोलार स्कुटर, हेलिकोप्टर टेक्नोलोजी, धुपबाल्दा घण्टी बच्ने उपकरण, ट्राफिक मास्क, बम डिस्पोजल रोबोट, अर्थक्वेक अलार्म, म्यानुअल लिफ्टिङ रोबोट, ग्र...
हुन्डाई सेन्ट्रो र सुजुकी सेलेरियो मध्ये कुन उत्तम ?
हुन्डाई र सुजुकी नेपाली बजारका सर्बाधिक दुई सफल अटोमोबाइल ब्रान्ड हुन् । यी दुबै ब्रान्डका अधिकांश कारहरु मध्यम बर्गलाई लक्षित गरि निर्माण गरिएका छन् । फलस्वरुप साना र सस्ता फेमिली कारमा सुजुकी र हुन्डाईकै अधिपत्य रहँदै आइरहेको छ । जसमध्ये से...
होन्डा एसपी १२५ र बजाज पल्सर १२५ मा कुन उत्कृष्ट ?
होन्डाले नयाँ होन्डा एसपी १२५ बाइक लन्च गरेको छ । सो बाइकमा बीएस६ इन्जिन जडान गरिएको छ । यो भन्दा पहिलो होन्डाले बीएस६ एक्टिभा १२५ लन्च गरेको थियो । अटो बजारमा सो बाइकले बजाज पल्सर १२५ सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । होन्डा एसपी १२५ नयाँ स्टाइलको साथमा लन...
कस्तो रहला नेपाली बजारमा सुजुकी एस–प्रेसोको प्रभाव ?
अन्ततः नेपाली बजारमा सुजुकी एस–प्रेसो भित्रिएको छ । ह्याचव्याक कार भन्दा केही अग्लो र फराकिलो एस– प्रेसोलाई कम्पनीले ‘माई फर्स्ट एसयुभी’ भनेको छ । अर्थात एसयुभी पारखीका लागी यो इन्ट्रि लेबलको एसयुभी हुने उसको भनाइ छ । १ सय ८०...
होन्डा एसपी १२५ : यस्ता छन् ५ विशेषता
जापानको टु ह्विलर कम्पनी होन्डाले हालै भारतमा नयाँ बाइक होन्डा एसपी १२५ लन्च गरेको छ । यो कम्पनीको पहिलो बीएस६ एमिशन नर्म्स अनुरुपको बाइक हो । शार्प र स्पोर्टी लुक भएको सो बाइकमा नयाँ फिचर समावेश गरिएको छ । अझै गुणस्तरीय इन्जिनसो बाइकमा इन्ह्यान्स्ड...
चार महिनामै हुन्डाईका यी चार कार लन्च हुने
कोरियन अटो निर्माता कम्पनी हुन्डाईले आउँदो चार महिनामा चार कार लन्च गर्ने भएको छ । कम्पनीले हुन्डाई अउरा, भर्ना सेडान, हुन्डाई आई२० र हुन्डाई क्रेटा लन्च गर्न लागेको हो । भारतीय बजारमा यी कार लन्च भए पश्चात नेपाली बजारमा पनि आउने सम्भावना हुन्छ । कम...
क्रेटासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् यी ४ नयाँ एसयुभीले
कम्प्याक्ट एसयुभी सेग्मेन्टमा सवैभन्दा बढी विक्री हुँदै आइरहेको हुन्डाई क्रेटालाई टक्कर दिन भारतीय बजारमा ४ वटा नयाँ एसयुभी आउँदैछन् । ती मध्ये केहीको बुकिङ समेत खुल्ला गरिसकिएको छ । क्रेटाको बढ्दो लोकप्रियताबाट प्रभावित भई विभिन्न कम्पनीहरुले अहिले...
प्रभावकारी भएन कामपाको ‘पिक एण्ड ड्रप’ कार्यक्रम
काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाले टुँडिखेल आसपास क्षेत्रमा शुरु गरेको सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रु कुरेर बस्न नपाउने ‘पिक एण्ड ड्रप’ कार्यक्रमको प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत पुस १ गतेदेखि टुँडिखेल...
बाइक र गाडीमा एड्भेन्चर राइड, मनाङ र मुस्ताङ गन्तव्य
मनाङ र मुस्ताङ, अनि यसको आसपास । पछिल्लो समयमा राइड कल्चरमा रमाउने नेपाली युवा र विदेशी पर्यटकहरुका लागि समेत यी डेस्टिनेसन निकै नै आकर्षण बनेका छन् । दसैं तिहारको छेको पारेर यो क्षेत्रमा घुमफिर गर्ने विदेशी मात्र होइन, नेपाली आन्तरिक पर्यटक समेत नि...
आज दराज डे : अनलाइनबाट खरिद गर्दा बाइक, स्कुटर र हेलमेटमा यस्तो छुट
काठमाडौं – आज नोभेम्बर ११ अर्थात कात्तिक २५ गते । नेपालमा पनि अनलाइन सपिङ साइट दराजले दराज डेको आयोजना गर्दैछ । ई–कमर्स साइट दराजले नेपालमा समेत दराज डेको आयोजना गरी अनलाइन सपिङलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । सो अवसरमा अन्यका साथै वि...
बिश्व प्रसिद्ध लुब्रिकेन्ट्स लुब्रेक्स, यस्ता छन् विशेषता
विश्वका ७० भन्दा बढी देशमा कारोबार गर्न सफल लुब्रेक्स लुब्रिकेन्ट्स पछिल्लो समय नेपाली उपभोक्तामाझ लोकप्रिय बन्दै गैरहेको छ । युएईमा उत्पादन हुने बिश्व प्रसिद्ध यो लुब्रिकेन्ट्सलाई नेपाली बजारमा युनिपेट्रो इनर्जी प्रालिले भित्र्याएको हो । नेपाल भित्...
यस्ता छन् आउदै गरेका ७ बाइक, ईआईसीएमएमा देखिए अनौठा र आकर्षक बाइक
हाल इटालीको मिलानमा ग्लोबल मोटरसाइकल शो ईआइसीएमए २०१९ प्रदर्शन भइरहेको छ । सो शोमा हिरा मोटोकर्प, केटीएम, होन्डा लगायत अन्य कम्पनी आफ्नो कन्सेप्ट बाइक प्रदर्शन गरेका छन् । त्यसैगरी विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्ना नयाँ बाइक प्रदर्शन गरेका छन् । आकर्षक र नय...
यस्तो छ बाहुबलीकी देवसेना अनुष्का शेट्टीको कार कलेक्सन
साउथ इन्डियन सिनेमाकी चर्चित नायिका अनुष्का शेट्टीले आज ३७ औं जन्मदिन मनाइरहेकी छिन् । उनी सन् १९८१ नोभेम्बर ७ मा कर्णाटकमा जन्मेकी थिइन् । सन् २००५ देखि फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी अनुष्काले हालसम्म आउँदा अनेकौं कारहरुको कलेक्सन गरेकी छिन् । यस्तो...
फिचर : अटोमोबाइल व्यवसायमा असफलता उन्मुख आईएमई ग्रुप
रेमिट्यान्स र बैंकिङ लगायत अन्य सेवामुलक उद्योगमा सफल आईएमई ग्रुपले अटोमोबाइल व्यवसायमा भने सफलता हात पार्न सकिरहेको छैन । अटोमोबाइल क्षेत्रमा उच्च सम्भावना देखेको भन्दै ट्याक्टर र एस्कर्ट्स ब्रान्डको हेभी इक्विपमेन्ट्स मार्फत अटोमोबाइल क्षेत्रमा प्...
खुर्कोट, ओखलढुंगा हुँदै सोलु पुग्यो विद्युतीय गाडी बीवाईडी एम थ्री
काठमाडौं– चिनियाँ विद्युतीय गाडी बीवाईडी एम ३ (एम थ्री) हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बु सम्म पुग्न सफल भएको छ । गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट प्रस्थान गरेको सो विद्युतीय गाडी सोलुखुम्बुको फाप्लुसम्म पुगेर एक रेकर्ड कायम गरेको छ । नेपालका लागि बीवाईडी...
चाडपर्वको सिजनमा पनि अपेक्षाकृत बिक्री भएनन् गाडी, के होला यसको असर ?
यस बर्षको दशैंलगायतका चाडपर्वमा सवारीसाधनको बिक्री बिगतका बर्षहरुको तुलनामा निकै कम भएको छ । विगतका बर्षहरुमा जस्तो यस बर्ष सवारीसाधनको कारोबार उल्लेख्य मात्रामा हुन नसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नजिकको हाम्रो छिमेकी देश भारतमा सवारीसाधनको बिक्र...
भारतमा अक्टोबरमा डिजायर सबैभन्दा बढी बिक्री, टप १० मा मारुती सुजुकीका ८ कार
अक्टोबरको उत्कृष्ट १० बेस्ट सेलिङ कारको लिस्टमा मारुती सुजुकीका ८ मोडल कार पर्न सफल भएका छन् । मारुती सुजुकीको डिजायर सो लिस्टमा पहिलो नम्बरमा परेको छ । यो वर्षको अक्टोबरमा डिजायर निकै चर्चित रहयो । सो महिना डिजायर १९ हजार ५६९ युनिट बिक्री भएको थियो...
पासपोर्ट समाएका रोल्पाली युवाका हातमा अब अटोको स्टेयरिङ
रोल्पा - युगाण्डा र मकाउ गरी ८ वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताएका रोल्पा नगरपालिका–९ ह्वामाका मदन बुढा अहिले रोल्पा सदरमुकाम लिवाङमा अटो चलाउँछन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएको भन्दै विदेश हानिएका उनी लामो समय देश बाहिर रहे । त्यहाँको कमाइले घरको...
सुजुकीको के – सिरिज इन्जिन, के हो ? के छन् विशेषता ?
ग्राहकका चाहनाहरु परिवर्तन भइरहन्छन् । बढ्दो प्रतिष्पर्धा र ग्राहकको चाहना अनुसार अटोमोबाइल इन्जिन निर्माताहरुले पनि उच्च दक्षतायुक्त, वातावरणमैत्री, भरपर्दो र उच्च शक्तिशाली इन्जिनको निर्माण र निर्यात गर्नुपर्ने चुनौती बढिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सुज...